Astaanta jeeganta “The Royal Arch” - Land Of Punt
Astaanta Jeeganta “The Royal Arch” waxay kamid tahay astaamaha ugu waa weyn ee maysooniyadu qaatan. Gaar ahaan waxaa iska leh “Royal Arch Masonry” waxayna ku saleysan oo laga aminsanyahay inaytahay albaabkii samada laga gelayey, waana astaamaha ugu muhiimsan ee nimankaasu isticmaalan ee quraafadka. Waxaad ugu tagey oo aad ku arkay astaanta jeeganta iyo cilmigeeda xafiisyada nimankaasu leeyihiin waxaana kamid ah meela ay sudhantahay calaamadanu xafiiska gaarka ah ee “York Rite system of the Masonic degrees”. Ururka guud ee “Royal Arch Masonry” waa halbawlaha maysooniyada.
Hindisaha ka danbaya samayska ururkan “The Degree of Royal Arch Mason” wuxuu salka ku haya masjidka Nabi Suleyman “The Temple of Solomon”. Xerta looyaqaan ilaaliyaasha masjidka Nabi Suleyman ayaa arimaha majaraha u haya oo aminsan inuu soo laabanayo Nabi Ciise “The return of Jesus”, waa inta loo sii diyaar garooba wuxuuna kusoo degaya templka Suleiman oo iminka uu ka dhisanyahay Masjidka Al-aqsa. “The Degree of Royal Arch Mason” waxaa ku shaqaysta oo arimahooda ka fuliya kooxda sugaysa ciise, astaantoduna waa tan aynu ka sheekaynayno ee Jeegan ama Jeegamo is dulsaaran. Waxaan ku kalsoonahay in muslimiintu khasatan soomalida aanay cilmi u lahayn calaamdahan ay tuurta kuwada sitaan oo aqoon daro hayso ujeedada loosameeyey astaamaha iyo nuxurka ay xambaarsanyihiin.
“Astaanta “The Royal Arch” waxaa loo turjumaa inay utaagan tahay kalsooni u haynta ku guulaysiga hawlgalka sixirka iyo ujeedhista jinn, guusha ku kalsoonida maalinta qiyaamaha iyo abaal gudka maalinta.”
astaanta jeeganta dahabshiil Iluminaatiga Ilumunati maysooniyada The royal arch ururada hadafka qarsoon leh